Home Carousel - Myanmar Online Game
Live Casino တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲ?
အမြဲတမ်းတိုးတက်လျက်ရှိတဲ့ Casino တွေရဲ့ရေပန်းစားမှုဟာ Gaming industry ကို Level အသစ်တစ်ခုစီခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မယ့် ခြေလှမ်းအသစ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ Casino တွေကအရင်ကလို နေရာအတိအကျ၊ အချိန်အတိအကျကြီးနဲ့ မဟုတ်တော့ဘူး။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီး မြန်ဆန်တဲ့…
Khin Hsu 80 Resources
Casino တစ်ခုမှာတွေ့နိုင်တဲ့ ကစားသမား 8 မျိုး
Casino ဆိုတာ မီးရောင်စုံတွေကြားမှာ လူတွေစည်ကားစွာနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ ခြေတစ်လှမ်းလှမ်းပြီးဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အားလုံးကပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ကစားနေကြတဲ့ ကစားနည်းတွေကို စမ်းကြည့်ချင်သွားမှာပါ။ အခုမှ Casino ရောက်ဖူးတယ်ဆိုတဲ့သူတောင်မှ အရောင်တွေနဲ့ခွဲပြီး စက်တွေ၊ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို…
Baccarat - ဘာ့ခရက် Black Jack (21)
Ace of Spade ကိုဘာလို့ Death Card လို့ခေါ်တာလဲ?
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကဒ်ကစားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Casino တစ်ခုမှာကစားနေရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Online Casino မှာကစားနေရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကိုင်ပြီးဆော့နေတဲ့ ကဒ်တွေရဲ့ Symbol တွေနဲ့ သူတို့ဘယ်ကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုတာကိုတော့ စိတ်ဝင်စားမိတယ်မဟုတ်လား? ဒီကဒ်တွေတော်တော်များများက အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ Symbol တွေပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ အထူးသဖြင့်…
ကစားနည်းတစ်ခုကို စတင်ကစားမယ့်ကစားသမားတွေဟာ အစပိုင်းမှာ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကစားရမလဲ၊ ဘာတွေလိုအပ်လဲ မသိရင် အချိန်တွေကုန်တဲ့အပြင် လောင်းကြေးငွေတွေလည်း ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရိုးလက်ကစားနည်း ကို စတင်ကစားမယ့် ကစားသမားတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့်အချက်အလက်လေးတွေကို…
Betting Guide ၏အခန်းကဏ္ဍ
Sport Betting ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလများစွာကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ ရှေးအကျဆုံး လောင်းကစား တစ်ခုပါ။ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတာကလွဲပြီး ဟိုးအရင်ခေတ်ကလူတွေ လောင်းကစားပြုလုပ်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း ယနေ့ခေတ်လူတွေလောင်းကစားပြုလုပ်နေဆဲပါ။ သင်နှစ်သက်တဲ့အားကစားအမျိုးအစားမှာ သင်နှစ်သက်တဲ့အသင်းကိုလောင်းကြေးထည့်မယ်။ သင်အနိုင်ရခဲ့လို့ရှိရင် ပိုက်ဆံရမယ်။…
စနူကာ ကစားနည်းဟာ ယခုအခါမှာ အသစ်ပြန်လည်ဆန်းသစ်လာပြီး လောင်းကစားဒိုင်များမှာလည်း စနူကာ နဲ့ပတ်သတ်တဲ့လောင်းကြေးရောင်းဝယ်မှုတွေ တိုးတက်လာပါတယ်။ ကမ္ဘာအရှေ့ပိုင်း (အထူးသဖြင့်အာရှဒေသ)မှာ လူကြိုက်များခြင်းကြောင့် အဆင့်တစ်ခုအထိ သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့လိဂ်တွေ၊ ကွာလီဖိုင်ယာပွဲတွေ၊ စီနီယာပွဲတွေကို လောင်းကစားဒိုင်အားလုံးမှာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။…
ပထမဆုံး ကာစီနို ဟာ ကစားသူတွေကို ပထမဆုံးအနေနဲ့တံခါးဖွင့်ပြီးကြိုဆိုခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း 400 နီးပါးလောက်ရှိပါပြီ။ အဲ့အချိန်ထဲကနေစပြီးတော့ အခုခေတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Casino ဆိုတဲ့ Concept က ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲမှုမရှိပေမယ့်လည်း အခုခေတ်မှာတော့ Online…
Live Casino ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ?
နည်းပညာတွေထွန်းကားတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ကာစီနိုတွေဟာလည်း တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေနောက်အမှီလိုက်ရင်း Live Casino ဆိုတဲ့အရာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၃ခုနှစ်မှာ Optical Character Recognition (OCR) ဆိုတဲ့နည်းပညာပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Live Casino တွေဟာ ကစားသမားတွေကြားမှာ ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။…
ပိုကာ ကစားတဲ့နေရာမှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကစားပုံဆိုပြီးမရှိပါဘူး။ သင်ဟာဘယ်လောက်ပဲ ကျွမ်းကျင်မှုရှိရှိ နောက်ထပ်လေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်ဘယ်လောက်လေ့လာထားထား အထူးသတိပြုရမယ့် အခြေခံအချက်လေးကို အာရုံမစိုက်မိရင် အမှားတစ်ချက်ကရှုံးနိမ့်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ Texas Hold`em ပိုကာကစားတဲ့နေရာမှာ ကစားသမားတွေပြုလုပ်မှုများတဲ့…
ကာစီနို ကစားသမားတိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ Skill6ချက်
ကာစီနို ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဒီနေ့ခေတ်မှာအရမ်းကိုလွယ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ကာစီနို တွေကို အပြင်မှာမသွားနိုင်ရင်တောင်မှ Casino game တွေ Online Casino တွေရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် အိမ်မှာထိုင်ရာကမထပဲ လွယ်ကူစွာနဲ့ပဲ Casino ကစားနိုင်ပါတယ်။…